Momba anay - Hebei Kenuo Rubber Products Co., Ltd.
Niorina voalohany tamin'ny 1994, miaraka amin'ny mpiasa fototra vitsivitsy. Miaraka amin'ny fivoarana, dia nandany ny orinasa morden androany. Ny renivohitra voasoratra dia 5 tapitrisa RMB, izay hita ao amin'ny faritra fampandrosoana ara-toekarena ao Xinle City ary misy velarana 26668 metatra toradroa, ny trano lehibe ahitana R&D trano, birao multifunctional trano, famokarana atrikasa, akora fitehirizam-bokatra, vita ny vokatra trano fanatobiana, herinaratra fizarana fahefana, fitoeran-drano mivezivezy, fitoeran-drano afo sy ny hafa ancillary fampitaovana. Ny orinasanay dia manana olona 118, ao anatin'izany ny mpiasa ambony 5, ny injenieran'ny fampandrosoana 3, ny teknisiana zokiolona 7, ny mpiasa famokarana 103 ary ny hafa. Ny orinasa dia manana sampana maromaro, rafitra fitantanana manara-penitra, fikorianan'ny asa tonga lafatra ary rafitra serivisy ho an'ny mpanjifa tsara, izay manome antoka matanjaka amin'ny fampandrosoana ny vokatra, famokarana, kalitao, varotra ary serivisy aorian'ny varotra sns.
Ny asa lehibe ao amin'ny orinasa dia ny famokarana, fanodinana ary fivarotana vokatra kiraro, poti-plastika, vokatra vita amin'ny fingotraary vokatra plastika. Ny famokarana mizana, ny vokatra avo lenta ary ny kalitao avo lenta dia tsy azo sarahina amin'ny fitaovana tena tsara, ary Kenuo Rubber dia nanambola be tamin'ny fampidirana sy ny famolavolana tsy miankina ary ny fanamboarana andalana famokarana maromaro. Ny orinasa dia manana andiam-pamokarana 3 ankehitriny vita amin'ny tile tile resahina synthetic sy SJZ80 / 156 ary tsipika famolavolana tsindrona tsindrona 12 vita amin'ny plastika vita amin'ny tsindrona, izay afaka mahatratra 75000 metatra toradroa ny takelaka silika manokana photovoltaic, 1,8 tapitrisa metatra toradroa an'ny synthetic. kapila resina, 300 metatra toradroa nygorodona maintso maitsoary kapa sandoka plastika 12 tapitrisa. Ny sandan'ny famokarana isan-taona dia 266 tapitrisa yuan.
Ny tile resin synthetic novokarina tao amin'ny orinasanay dia manana ny toetran'ny fanoherana ny fahanterana, ny fanoherana ny enta-mavesatra, ny fanoherana ny harafesina, ny hafanana, ny fijanonana amin'ny afo, ny insulation, ny fitsitsiana angovo ary ny fiarovana ny tontolo iainana, izay be mpampiasa amin'ny injenieran'ny flat-to-slope, ny faritra honenana any ambanivohitra vaovao, efitrano sy trano fandraisam-bahiny, manintona amin'ny fomban'ny ntaolo, fiara sy garazy, indostria sy toeram-pitrandrahana harena ankibon'ny tany, zavamaniry fanoherana asidra sy alkaly, tranobe fiarovana ny ratra amoron-dranomasina sy toerana hafa, izay fitaovana mety indrindra amin'ny karazany rehetra ny tafo fanaingoana trano maharitra sy tantera-drano. Ny famokarana Kenuotaila resina sentetika mitarika ny fanitsiana ny firafitry ny indostrian'ny indostrian'ny taila, izay mamaly tanteraka ihany koa ny politikam-pirenena fiarovana ny tontolo iainana ny karbaona ambany sy ny fametrahana ny fiarahamonina miaro angovo.
Ny vokatra kiraro novolavolain'ny orinasanay dia asongadin'ny endrika tsy manam-paharoa, ny fomba feno, ny kalitao milamina, ny fahamendrehana sy ny hatsaran-tarehy, ny fiarovana ara-pahasalamana sy ny tontolo iainana, izay manana EVA, PE, PVC, plastika, pataloha vita amin'ny plastika, kapa, kapa, kiraro amoron-dranomasina , kapaoty, kapaoty fandroana, kapa hotely, kapaoty sariitatra, kiraro jelly, kapaoty mpivady ary kiraro landihazo EVA. Ny orinasa dia nanoratra ny marika "Home Baby" sy "Jianmeida", izay nanatsara ny fahitana ny vokatra sy ny lanjan'orinasa an'ny orinasa.
Tamin'ny volana aprily 2014, ny orinasa dia nisoratra anarana sy niasa tao amin'ny magazay Taobao, izay nampitombo ny fantsom-barotra, natambatra tamin'ny mpanjifa mivantana, nahatakatra tsara ny filan'ny mpanjifa nefa nahatsapa ny habetsaky ny varotra ary nametraka fifandraisana tsara amin'ny mpanjifa. Ny tamba-jotra varotra an'ny orinasa dia manerana ny faritany 20 sy ny tanàna ary ny faritra mizaka tena manerana ny firenena, ary manana laza ambony eo amin'ny tsena. Nandritra ny fametrahana ny tsena anatiny dia tadiavo am-pahavitrihana ny tsena iraisam-pirenena, ny 1 febroary 2013, ny orinasa dia nahazo ny taratasy fanamarinana fisoratana anarana ho an'ny sampana fanambaràna ny fadin-tseranan'ny Repoblika vahoaka taorian'ny fanaraha-maso (encoding de ladoan'ny fadintseranana: 1301965360); tamin'ny Oktobra 2014, ny orinasanay dia nekena ho mpikambana ary nahazo ny mari-pankasitrahana ho an'ny Chamber of Commerce ho an'ny fanafarana sy ny fanondranana ireo vokatra indostrialy maivana sy zavakanto asa-tanana (Certificate No. 03140021). Manatanteraka varotra ivelany amin-kery, mba hahafahan'ny vokatra Kenuo mivoaka amin'izao tontolo izao.